Sida loogu noolaado cudurka safmarka haddii aad hore u qabto dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda | Mental Health Foundation
Sida loogu noolaado cudurka safmarka haddii aad hore u qabto dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda
Cudurka safmarka ee COVID-19 ayaa laga yaabaa in uu caqabad gaar ah u keeno dadka naga mid ah ee dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda qaba – meel kastoo aan ka marayno socdaalkaas.
Haddii aan hadda rafaad ku jirno, waxaa nagu sii adkaan karta in aan taageero helno, haddiina aan si fiican isku dabbarno waqtiga intiisa ugu badan, waxaa nagu sii adkaan karta in aan adeegsanno hababka aan caadi ahaan dhibaatada ugu adkaysanno. Haddii ay kugu adag tahay in aad dhibaatada hadda u adkaysato fadlan booqo boggan si aad u hesho liiska khadadka caawinta iyo khayraadyada.
Sababta ay u dhici karto in cudurka COVID-19 uu dhibaato weyn u noqdo dadka naga mid ah ee nolosha ku soo maray dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda?
Dadka naga mid ah ee nolosha ku soo maray dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda waxaa, iyadoo laga xumaado, siyaado loogu filan karaa in ay la kulmaan sinnaan la'aan iyo caqabado caafimaad. Waxaa suurogal noo sii ah in aan cidla galno, waxaan halis dheeraad ah ugu jirnaa in aan yeelanno xaalado kaloo caafimaad oo noo sii nugleeya cudurka COVID-19 waxaana badi nagu adkaata in aan taageero codsanno oo aan helno, xataa waqtiyada ugu fiican.
Mararka qaar, xadaymaha saaran nolosheena iyo wararka warbaahintu ay ka bixiso cudurka safmarka ayaa ka hor iman kara dhacdooyinka naga soo maray caafimaadka maskaxda, ama masiibo noocyo kale ah. Waxay tani ka sii dari kartaa haddii aan hore xiriir ula yeelannay booliiska ama Nidaamka Caddaaladda Dembiyeed, ama haddii isbitaal nalagu hayey.
Waxaa laga yaabaa in ay noo suurtogeli weydo in aan adeegsanno shabakadda ama dadka caadi ahaan taageerada na siiya, aragno saaxiibbada, ama u tagno kooxdeena taageerada faca/is caawinta. Waxaa laga yaabaa in gurigu uusan ahayn meel nabad leh. Adeegyada waxaa saaran culays oo xiriirrada aan la leenahay xirfadleyaasha ee badi daruuri u ah nolosheena ayaa hadda is beddelaya. Waxaa laga yaabaa in ay is beddeshay taageeradii aan haysannay, waxaana dhici karta in ay noo suurtogeli weydo in aan aragno shaqaalaha taageerada ee aan barannay.
Waxaan dareemi karnaa in walaacyadeena, ama sii xumaanshaha caafimaadkeena maskaxdu, ay culays dheeraad ah naga saarayaan dadka aan jecel nahay, nidaamka aan isku taageerno, iyo adeegga NHS.
Wax kastoo aan dareensan nahay, waxaa la fahmi karaa, xataa la filan karaa, in waqtigan caqabadda u leh dunidu uu waxyeello noo keeni doono.
Waa maxay tallaabooyinka aan isku dayi karno in aan qaadno si aan u daryeelno caafimaadkeena maskaxda waqtiga xaadirka ah?
Waxaa jira fikrado farabadan oo ku saabsan caafimaadka maskaxda oo waqtiga xaadirka ah la isla wadaago, qaar farabadan oo ka mid ah ayaa waxtar u leh dadka naga mid ah ee qaba dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda.
Fikradaha hoose ayaa loogu talagalay in laga dhaqaaqo. Wax kastoo aan isku dabbari karno, ee hagaag laga dareemo, ayaa fiican oo kugu filan. ​
1. Isku day in aad samayso waxyaabaha aasaasiga ah marka aad karayso
Cuntaynta, seexashada, dhaqdhaqaaqidda (ama gudaha ama dibadda) iyo hubinta in aan jirkeena biyo siinno ayaa ah tiirarka nolosha lagu dhiso, waxayna muhiim u yihiin caafimaadkeena maskaxda – laakiin waxaa la moodi karaa in ay kaa culays badan yihiin waqtiga sidan ah.
2. Isku day in aad aqbasho in aad u qalanto taageerada lagu siiyo
Way adag tahay in dadka gargaar la weydiisto waxaana adkaan karta in la aamino in aad u qalanto waqtiga ay dadku ku siiyaan. Waxaa weliba adkaan karta in aad aaminto in aad adigu dadka wax u tari karto. Waad u qalantaa taageerada lagu siiyo. Isku day in aad naftaada u naxariisato. Naxariista la isku muujiyo marwalba waa muhiim – inkastoo ay adkaan karto.
3. Isku day in aad qorshe la samayso kooxda iyo xirfadleyaasha adiga ku taageera
Haddii aad taageero ka hesho adeegyada caafimaadka maskaxda ama ururro kale, iyaga weydii sida ay xaaladdu isku beddeli doonto waqtiga aan sii dhex guurayno cudurka safmarka. Isku day in aad weydiisato waxa aad u baahan tahay, haddii aad karayso. Haddii aadan dareensanayn in aad sharxi karto dhibaatooyinka, eeg haddii qof aad saaxiibbo tihiin ama qoyskaaga ka mid ahi uu kaa caawin karo in aad sharraxdo, ama isku day in aad meel ku qorto.
4. Isku day in aad dhisato goobaabo taageero
Goobaabada taageeradu waa koox dad ah iyo qalab aad hareerahaaga ku soo ururiso si aad ugu adeegsato waqtiyada adag. Waxay tani noqon kartaa taageero camali ah ama shucuureed. Goobaabada taageeradu waxay noqon kartaa mid loo joogo ama dijital ah – sida kooxda barnaamijka WhatsApp.
5. Isku day in aad xiriirro dhisato oo aad xafidato, xataa marka ay u muuqato in ay adag tahay
Inteena ugu badan waxay u baahan yihiin in ay isku dheelli tiraan keli ahaanteena iyo la joogidda dadka kale. Keli ahaanta khasab nagu noqota waxay noo keeni kartaa waxyeello, waxaana caafimaadkeena maskaxda aad muhiim ugu ah la xiriirrada dadka kale.
La xiriiridda dadka ee suurogal ku ah internetka ama telefoonka ayaa wax badan tari karta - laakiin weliba yeelan karta culays badan ama jahwareer. Waxay qaadan kartaa waqti si loo fahmo sida ay u shaqeeyaan abb-yada ama barnaamijyada kaladuwan ama qalabka internetku iyo kuwa adiga kugu habboon (haddii ay jiraan).
6. Isku day in aad isku tiiriso waayo aragnimada aad hore ugu yeelatay u adkaysiga ama ka gudubka dhibaatada
Haddii aad hore ula kulantay dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda, waxaa suurogal ah in aad soo dhaaftay waqtiyo aad cidla joogtay, gooni u go'nayd, ama caqabad la kulantay. Waxaa laga yaabaa in aad waqti hore iskaga yaabisay waxa aad awood u yeelatay in aad u adkaysato. Waa waqtigii aad xasuusan lahayd waqtiyadaas oo aad isticmaali lahayd casharkaas. Isku day in aad wax fiican naftaada u samayso maalin walba oo aad maamuusto ama xusto guulaha yar yar ee aad gaarto – xataa haddii ay u fududdahay sida dhaqidda timahaaga ama socod aad u baxdo.
7. Isku day in aad wax u sheegato – dadka kale si gaar ah
Waxaa adkaan karta in la sheego waxyaabaha aan dareensan nahay waqtiyada adag. Dibad u soo saaridda ayaa wax tari karta – haddii aan dadka u sheegno iyo haddii kale. Waxaa aad u fiican haddii aad haysato dad aad aaminayso oo aad wax u sheegan karto laakiin xataa haddii aadan haysanin, waxaa wax badan tari karta in aad wax meel ku qorto si aad dib iskugu noqoto. Dadka qaarkood waxaa wax u tarta in ay xasuusqor ka sameeyaan waxyaabaha ay ka mahadnaqayaan, ama waxyaabaha ay barteen, si kaste ha u yaraadaane.
8. Isku day in aad xadayso wararka aad dhegeysato ama daawato
Wararku waxay dhammaantood ku saabsan yihiin koronafayrus waxaanay tani nagu kordhin kartaa walwalka ama baryaqaadka, goortaasoo aan fikir walba ku calalinno maskaxdeena. Haddii ay tani adiga dhibaato kugu tahay, markaa isku day in aad dhegeysato ama akhrisato hal barnaamij war ah maalintii, ka dibna demi oo waxyaabo kale samee – inkastoo ay tani dhammaanteen nagu adag tahay waqtiga xaadirka ah.
9. Isku day in aad waqtiga xaadirka ah ku joogto ​
Qaar farabadan oo naga mid ah ayaa waqti hore soo maray waxyaabo saamaynaya sida aan hadda nolosheena u wadanno. Qaar farabadan oo naga mid ah ayaa weliba ka walwala sida ay xaaladdu ku dambayn doonto mustaqbalka. Labadaasiba waa muhiim – si aan nolosheena u fahanno oo aan wax u qorshaysanno – laakiin waqtiga ay socdaan xadaymaha koronafayrus, waxaa wax tari karta in la isku day in lagu noolaado waqtiga xaadirka ah. Ku soco maalinba maalin haddii aad karayso.
Waxay taasi ka dhigan tahay in aan xushmayno wixii tagay iyo macnihiisa, laakiin in daqiiqo, saacad iyo maalin kaste oo aan ku jirno aan u qaadanno fursad cusub, iyo tallaabo kale oo loogu socdo dhammaadka xadaymaha.
Haddii aan ka shaqayn karno in aan nafteena cafinno oo aan nafteena daryeelno – wax ayay tari doontaa. Dhex marid ayaa lagu dhaafaa.
10. Isku day in aad qayb ka noqoto bulshadaada oo aad caawiso, haddii aad karti u leedahay
Haddii aad caafimaad qabto, waxaa laga yaabaa in ay jiraan waxyaabo aad bulshada ka dhex qaban karto si aad u caawiso - gaar ahaan haddii aad guriga joogto. Lugaysiinta eyda deriska, qaybinta cuntada oo aad caawiso ama mutaddawac aad ka noqoto hindiseyaasha bulshada xaafadda ayaa noqon kara hab aad u fiican oo dib loogu faa'iideeyo dadka.